N+ 250911 ဆင်းရဲမွဲတေမှု့ပေါ်အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » N+ 250911 ဆင်းရဲမွဲတေမှု့ပေါ်အမြင်
N+ 250911 ဆင်းရဲမွဲတေမှု့ပေါ်အမြင်
Posted by nature on Sep 25, 2011 in Creative Writing | 47 comments
ဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆိုတာတွေကို တော်တော်လေး ကြားနေရပါတယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ ဘယ်လိုတိုက်ဖျက်ရမလဲဆိုတာ ရွာသားများ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြစေလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့်ကျွန်တော့အမြင်ကို သာ တင်ပြခြင်းဖြစ်လို့ လိုအပ်ချက်အားနည်းချက် တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုရင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ၀င်ငွေမရှိလို့ ငွေ မရှိလို့ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းနိုင်ကြမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ငွေမရှိတာလဲဆိုတာကို ရှင်းနိုင်ရင် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြီးသားဖြစ်ပါမယ်။ ငွေရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ရှုင်းနိုင်ရင် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်အောင် လုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတဦးနဲ့တဦး အယူအဆ များစွာ ကွာခြားနိုင်ပြီး တော်တော်လည်း ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားသဘောနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ရေသောက်မြစ်ကို မှန်ကန်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ရင် မုချ ပြေလည်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။အကြောင်းမှန်ကတော့ တော်တော် ရှာရခက်ပါတယ်။
ဆင်းရဲခြင်းဟာလဲ နိုင်ငံ ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ပြည်သူဆင်းရဲခြင်းဆိုပြီး ၂မျိုးရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဆက်စပ်နေတယ်ထင်ပါတယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ ဆိုရင် ၀င်ငွေမရှိလို့။ ၀င်ငွေဘာကြောင့်မရှိရလဲဆိုရင် အလုပ်မရှိလို့ ၊ ထီမပေါက်လို့ အမွေမရလို့ ၊၀ိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ အကြံကောင်းပေးနိုင်မဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း မရှိလို့ ။ ထီမပေါက်တာ အမွေမရတာက ခဏ ထားပါ။
အလုပ်ဘာကြောင့်မရှိရလဲ ဆိုရင် အလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေ အလုပ်ရှင် တွေ မရှိလို့ (အလုပ်ရှားလို့) ။ အသက်မွေးမှု အတတ်ပညာမရှိလို့။ ပျင်းလို့။ အလုပ်လုပ်ချင်သူနဲ့ အလုပ်ပေးနိုင်သူတွေ မချိတ်ဆက်မိလို့ ။ ကိုယ်က ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိလို့ အလုပ်ပေးသူတွေက သဘောမကျလို့။ ကိုယ်ကရိုးသာစွာ လုပ်ကိုင်သော်လည်း အလုပ်ပေးသူတွေက အနိုင်အထက်ပြုတာမခံနိုင်လို့။
အလုပ်ရှင်တွေဘာကြောင့်မရှိလည်းဆိုတော့ နည်းပညာဗဟုသုတ နှင့် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်မှု ယုံကြည်မှု အားနည်းလို့ ၊ ငွေကြေး မလုံလောက်လို့ ၊ ဘာတွေလိုအပ်လဲ ၊ လိုတာတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိလို့ ။ တကယ်လုပ်ငန်းကြီးလုပ်တဲ့သူတွေကိုချေးငွေ ချပေးခြင်းဟာလည်း သွယ်ဝှိက်သောနည်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးခြင်းတခုလို့မြင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှင်တဦးဟာ သူတယောက်တည်းလုပ်လို့မရပါ။ အလုပ်သမားတွေငှား ရပါမယ်။ ဒါဟာလည်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးခြင်းလို့မြင်ပါတယ်။ သူတို့ကို လုပ်ကြ လုပ်ကြလို့ ပြောနေတာထက် အကျိုးအမြတ်ရှိမယ့်အလုပ်တွေဆို သေဒဏ်ပေးလဲခိုးလုပ်မဲ့သူတွေရှိမှာပါ။ အကျိုးအမြတ် ရရှိခြင်းကိုခွင့်ပြုရပါမယ်။ချေးငွေရရှိသူဟာ ရွှေဝယ်လှောင်ရင်တော့ အလုပ်သမားတွေ အလုပ်ရရှိမှာမဟုတ်ပါ။
ယခင်အစိုးရများလက်ထက်ကုန်သည်တွေကို အမြတ်ကြီးစားတွေလို့သတ်မှတ်ပြီး အမြင်စောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲအရှုံးခံခဲ့ ပါတယ်။ အစိုးရက အရှုံးခံလုပ်နိုင်ပေမဲ့ ပြည်သူတွေက မိသားစု စားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်အတွက် အရှုံးခံမလုပ်နိုင်ပါ။ ယုတ်စွအဆုံး ၀န်ထမ်းများသည်ပင် မိမိတို့ ၏ ကာယ ဥာဏအားများကို အရင်းအနှီးပြုကာ လစာဟူသော အကျိုးအမြတ်ကို ရယူကြရပါသည်။
စီးပွားရေးဈေးကွက်သဘောတရားအရ ကုန်သည်များသည် supply & demand ကို ကြည့်ပြီး အမြဲယှဉ်ပြိုင်နေရပါသည်။ အာဏာကိုအသုံးပြုရင်တော့ အကျိုးအမြတ်များပြီး ပြိုင်ဘက်မရှိပါ။ ကုန်သည်သဘောမှာ အကျိုးအမြတ် ကောင်းပြီဆိုတာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မဲ့လူသစ်တွေ များစွာထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
export promotion နဲ့ပတ်သက်ပြီး exporter တွေ အကျိုးအမြတ်ရှိရင်တိုးတက်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ exporter တွေအကျိုးအမြတ်ရှိရင် ပိုစိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ exporter ရဲ့အခွန်ကို အရင်အတိုင်းကောက်ပြီး တနှစ်ပြည့်လို့ ရှိရင် ၁% သို့ ၂% refund ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင် export ကို ပို စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ချင်သူနှင့် အလုပ်ပေးနိုင်သူတွေချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ website ကို လူတိုင်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်အောင် သတင်စာ ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းထဲ နေ့တိုင်းထည့်ပြီး ရပ်ကွက်ရုံးတွေနဲ့ ရဲစခန်း အလုပ်သမားရုံးတွေ အစရှိတာတွေကိုပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေထားသင့်ပါသည်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးအတွက်အစိုးရ နှင့်ပြည်သူ ၂ဘက်စလုံးတွင် ကိုယ့်တာဝန်ကိုကြေရန်လိုပါသည်။ အစိုးရက ဖန်တီးပေးထားသောအခွင့်အလမ်းပေါ်တွင် ပြည်သူများက ကံ ဥာဏ် ၀ိရိယ ကို အပြည့်အ၀အသုံးပြုပြီး ကြိုးစားကြရပါမည်။ ဥာဏ်နှင့်ဝီရိယကို အစွမ်းကုန်အားထုတ်နိုင်သော်လည်း ကံ ကောင်းဖို့ မှာဒါန သီလ ဘာဝတရားများကို ကြိုးစားအားထုတ်ရပါမည်။ ဒါန နဲသောသူသည် ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေလို့ခက်တတ်ပါသည်။ ကိုယ်ပြုသမျှသည်ကိုယ့်ကံသာဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓ၏ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချမ်းသာခြင်း အကြောင်းတရားများဖြစ်သော ဒါနပြုခြင်း ၊ ၅ပါးသီလစောင့်ထိမ်းခြင်း ၊ သူတော်ကောင်းတရား ၊ မင်္ဂလာတရား ၊ မေတ္တာ တရားတော်များကို ကောင်းစွာ ပွားများ ကျင့်သုံးခြင်းသည်လည်း ချမ်းသာသော အကြောင်းအခွင့်အလမ်းများရရှိစေနိုင်ပါသည်။
သိပ်ကောင်းတဲ့စာလေးပါ ။ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးတင်လို့ မဆုံးပါဘူး။
အကြောင်း မကောင်းလို့ အကျိုးမကောင်းတာ ဆိုတာကို ကိုယ် အကြွင့်မဲ့လက်ခံပါတယ် ။
တော်တော်လေးရေးထားပြီးမှ update လုပ်မရပဲ ပျောက်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် save draft မလုပ်ပဲ တိုက်ရိုက်တင်လိုက်တယ်။
အရှည်ကြီးများ ဖတ်ရမလားလို့ အနီးကြည့်မျက်မှန်တောင်လဲတပ်ပြီး ဖတ်လိုက်တာ ….
ကျွန်မကတော့ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ် … တချို့အကြောင်းရင်းတွေက ရှေးဘ၀ အတိတ်ကံနဲ့လဲ ဆိုင်သေးတယ် … ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ပရဟိတ မိဘမဲ့ကျောင်းကို ထမင်းသွားကျွေးတော့ ကလေးတွေ ဆင်းရဲသားဗိုက်ထဲဝင်စားလိုက်တော့ မွေးရာပါ ဆင်းရဲဇာတာပါလာတယ် … ထမင်းသွားကျွေးတဲ့ မိသားစုမှာပါလာတဲ့ ကလေးလေးက သူဌေးဗိုက်ထဲဝင်စားတော့ မွေးရာပါ သူဌေးလေးဖြစ်နေတာ … ကွာခြားချက်က သိပ်မြင့်တယ်နော် …
စိတ်ဓါတ်ဆိုတာကလဲ မျိုးရိုးလိုက်ပါတယ် … ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးတွေကလဲ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်လိုက်တာပဲ … အခုတော့ စိတ်ဓါတ်ရော ဥာဏ်ရည်ပါ အကျဘက်ကို ဦးတည်နေတော့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပိုများလာတယ် … အဲဒါကို ပြင်ဖို့အတွက် စီမံကိန်းက နှစ်ရှည်စီမံကိန်းမှသာဖြစ်နိုင်မှာမို့ အစိုးရဘက်က စနစ်တကျ ရေရှည်ကိုင်တွယ်ရမှာ … တရားသဘောဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ အတိတ်ဘ၀က အကုသိုလ်များကြလို့၊ အလှူအတန်းနဲခဲ့လို့ .. စသဖြင့် ….
ဝေေ၀ရေ၊ အစကရေးထားတာ တော်တော်ရှည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ update လုပ်တာ ပျောက်ကုန်လို့ ၃ ပုံ ၁ပုံ လောက်ပဲကျန်တော့လို့ ပျောက်ကုန်မှာစိုးလို့ ရှိတာလေး မြန်မြန်တင်လိုက်တာ။
ဆင်းရဲမှုတွေ လျော့ချဖို့ အလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ သူဌေးများများ ရှိဖို့ လိုတယ်။
အားလုံးပဲ သူဌေးဖြစ်အောင် လုပ်ကြပါဗျို့..
မယုံလည်းနေဗျာ။ ဆင်းရဲတာ သောက်ပျင်းကြီးလို့။ ပျင်းလို့တော့ဖျင်းတယ်။ ဖျင်းလွန်းတော့ သူများချယ်လှယ် တာခံရတယ်။ အလုပ်ကလုပ်ချင်ရင် လက်နှစ်ဖက်နဲ့တောင် မနိုင်ဘူး။ လုပ်စရာတွေ များလွန်လွန်းလို့။ ကျွန်တော်သိထားတဲ့ သူဌေးမှန်သမျှ အလှူအတန်း မလုပ်ကြဘူး။ မရှိတရှိတွေကတော့ လှူကြတမ်းကြတယ်။ ကျွန်တော်သိထားသမျှ သူဌေးတွေ တစ်ယောက်မှ မကောင်းဘူး။ ကောင်းဟန်ဆောင်တာတော့ တော်တယ်။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ လုပ်မှဖြစ်တယ်။ ဒါနရှိတာမရှိတာနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
” ကျွန်တော်သိထားတဲ့ သူဌေးမှန်သမျှ အလှူအတန်း မလုပ်ကြဘူး
ကျွန်တော်သိထားသမျှ သူဌေးတွေ တစ်ယောက်မှ မကောင်းဘူး ”
Dear တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေရင်း ရှုံးနိမ့်နေသူတစ်ဦး ,
Not all “သူဌေးမှန်သမျှ”
Please ask/find out about,
U Shein Win ( Tet Lann Construction )
After learning about him properly,
You will regret for your saying
” သူဌေးတွေ တစ်ယောက်မှ မကောင်းဘူး “
By the way, I agree for this ;
” ဆင်းရဲတာ သောက်ပျင်းကြီးလို့ ”
” အလုပ်ကလုပ်ချင်ရင်လုပ်စရာတွေ များလွန်လွန်းလို့ “
တရားရှာ/ ရှုံး ရေ (နာမည်ကို ရှည်လို့ အတိုပဲရေးမယ်နော်) ။
….ကျွန်တော်သိထားတဲ့ သူဌေးမှန်သမျှ အလှူအတန်း မလုပ်ကြဘူး။ မရှိတရှိတွေကတော့ လှူကြတမ်းကြတယ်။ ….
ကံဆို ပစ္စုပန်ကံနဲ့ အတိတ်ကံ လို့ရှိပါတယ်။ အတိတ်ကံအင်မတန်ကောင်းနေတဲ့သူဟာ သူ့ရဲ့ကံအကျိုးပေး မကုန်သေးသ၍ ဆိုးတာလုပ်လဲ ဆိုးကျိုးမပေးပါဘူး။ အတိတ်ကံအင်မတန်ဆိုးနေတဲ့သူဟာ သူ့ကံအကျိုးပေး မကုန်သေးသ၍ ကောင်းတာလုပ်လဲ ကောင်းကျိုးမပေးပါဘူး။ ကံဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်ဖို့ ခက်ခဲတာအမှန်ပါ။
ဥပမာ-ဆားတဆုတ်ကို ရေထဲထည့်တယ်ဆို အဲဒီရေ ငံသွားမလား။ မငံသွားဘူးလား။ ရေခွက်ထဲကို ဆားတဆုတ်ထည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီရေဟာ ငံပြီး သောက်လို့တောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မြစ်ထဲကို ဆားတဆုတ် ထည့်မယ်ဆိုရင် ဒီရေဟာ ဘာမှ ထူးခြားလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ ဆားတဆုတ်ကို ရေထဲ ထည့်လိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ မကောင်းကျိုးတွေ ပေးနေပြီဆိုရင် ကိုယ်ရဲ့အတိတ်ကံ က ဖန်ခွက်ထဲရှိတဲ့ ရေလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာ သိရမှာပါ။ ကိုယ်က အကုသိုလ်လုပ်ပေမဲ့ မကောင်းကျိုးကို မပေးရင်တော့ကိုယ်ရဲ့ ကုသိုလ်ကံဟာ မြစ်ကြီးလောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိရမှာပါ။
သူချမ်းသာဖို့ထက် ကိုယ်ချမ်းသာဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ သူကောင်းဖို့ထက် ကိုယ်ကောင်းဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ လှုတယ်ဆိုရာမှလည်း ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့အညီ (တချို့လည်းမသိပေမဲ့ တရားတော်နဲ့ ညီတတ်ပါတယ်။ ) ညောင်စေ့လောက်လှုပြီးညောင်ပင်ကြီးလောက် အကျိုးများအောင်လှုတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းဟာ ဒါနဟာ ချမ်းသာတဲ့ အကျိုးကို ပေးတတ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါနဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ငွေ ကိုယ့်ပစ္စည်း ကို သူတပါးကိုပေးတာပါပဲ။ ပေးကမ်းခြင်းသည်အောင်မြင်ရာ၏ တဲ့။
ဥပမာ- ခွေးလေးတကောင် ကို အစာကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ ဒါနလုပ်ရင် ခွေလေး ဟာ အမြီးနန့်မယ်။ အိမ်စောင့်ပေးဖော်ရမယ်။ ကိုယ့်ကို ချစ်ခင်မယ်။ဒါဟာ နောင်ဘ၀ အကျိုးပေးတာကို အသာထားပြီး ဒါနက လက်ငင်းအကျိုးပေးတာပါပဲ။ ရုံးတွေမှာလည်း လဘက်ရည်ဖိုးပေးရင် ကိုလိုတဲ့အလုပ်တွေ မြန်မြန်ပြီးမြောက်စေနိုင်တာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါကတော့ အပေးအယူသဘော နိမ့်ကျတဲ့ ဒါနဖြစ်ပါတယ်။
တက်လမ်းဦးရှိန်ဝင်းဟာ လည်း ချီကြူးစရာပုဂ္ဂိုလ်တဦးပါ။ အဘိဓမ္မာ စာပြန်ပွဲကြီး မှာ သူလှုတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။
….အလုပ်ကလုပ်ချင်ရင် လက်နှစ်ဖက်နဲ့တောင် မနိုင်ဘူး။ ….
လက်နှစ်ဘက်နှင့်မနိုင်သော အသင်သည်ယနေ့မှစ၍ လက် ၁၀ဘက်ပေါက်စေသော်။
အလုပ်သမား ထပ်ငှားပါလို့ပြောတာနော် ။ တလွဲမတွေးနဲ့။ စိတ်မဆိုးနဲ့ စ တာ ။
Do you have any connection/attachment with “အဘိဓမ္မာ စာပြန်ပွဲကြီး” ???
Every year, I also donate to “အဘိဓမ္မာ စာပြန်ပွဲကြီး”.
ကျွန်တော်လည်း အဘိဓမ္မာ စာပြန်ပွဲမှာ တတ်နိုင်သလောက်လှုပါတယ်။ မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့စကားစပ်မိလို့ စလှုဖြစ်တာပါ။ ဒီနှစ်တော့ တက်လမ်းဦးရှိန်ဝင်းရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ တော်တော် အဆင်ပြေတယ်ကြားပါတယ်။ တကယ်ပဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
” ဒီနှစ်တော့ တက်လမ်းဦးရှိန်ဝင်းရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ ”
Somethings wrong, တက်လမ်းဦးရှိန်ဝင်း & his group donate every years.
not only this year, He is one of the organizer of “အဘိဓမ္မာ စာပြန်ပွဲကြီး”.
Some years, I even give certificate to monks & novices who passed အဘိဓမ္မာ စာပြန်ပွဲ.
ကျနော်က အဲဒီနဲ့ သိပ်အဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး ။ ဒီနှစ်မှ ဦးရှိန်ဝင်းလှုတာကိုသိတာ သတိထားမိတာ ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်း လှုတယ်လို့တော့ ကြားရပါတယ်။
ကျမ မနှစ်က မာတိကာတစ်ကျမ်း ဖြေပါတယ်၊ဒီနှစ် ဓာတုကထာဖြေပါတယ်၊
အရင်ဥက္ကဌကြီးဦးညွန့်စိန်က အသက်?90 ကျော်လို့ အနားယူတော့ ဦးရှိန်ဝင်းကို ဥက္ကဌတင်ကြပါတယ်၊
ဆင်သွားတော့ လမ်းဖြစ်သလို စီးပွားရေးအောင်မြင်တဲ့လူဦးဆောင်တော့ ပိုတိုးတက်တာကို Nature ကပြောချင်တာဖြစ်ပါမယ်၊
အရင်းအနှီးမရှိသော်လည်း အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ကြိုးစားမှုနဲ့ ရိုးသားမှု ၂ ခုကို အရင်းအနှီးပြုနိုင်တယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူဌေးမဆို သူတစ်ယောက်တည်းနဲ့ အလုပ်တစ်ခုလုံးကို ပြီးပြည့်စုံနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ လက်အောက်ငယ်သားပေါင်းများစွာ လိုအပ်မှာပါ။ အဲဒီအထဲမှာ ပညာတတ်တဲ့လူရော၊ ပညာမတတ်တဲ့လူရော သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူဌေးမဆို ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လူ၊ ကြိုးစားတဲ့လူ၊ တာဝန်သိတဲ့လူ၊ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ ရိုးသားမှုရှိတဲ့လူကိုသာ အလိုရှိကြပါတယ်။ (လစာနည်းတာ များတာကို မပြောလိုပါ) ၁၀တန်းမအောင်လို့ ညစောင့်၊ ဂိတ်စောင့်၊ သန့််ရှင်းရေး လုပ်သားပဲ လုပ်ရတယ်ထားဦး ရိုးရိုးသားသား ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ရင် (ဆင်းရဲမွဲတေမှုလို့ပြောနေတဲ့) ထမင်းတော့ မငတ်နိုင်ပါဘူး။ လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်း ပညာတတ်အောင် ကြိုးစားခြင်းဖြင့် ဘ၀တက်လမ်းကို ရှာဖွေနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ သင်တန်းဆင်းစာရွက်တွေ အများကြီး ကိုင်ထားပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိပဲ လစာအများကြီး မျှော်လင့်ပြီး ယောင်ခြောက်ဆယ် ဖြစ်နေမယ့်အစား သင့်တော်ရာ အလုပ်တခုကို ၀င်လုပ်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိလာအောင် အရင် ကြိုးစားရပါမယ်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိလာတာနဲ့ ကိုယ့်ပညာ အရည်အချင်းနဲ့ ပေါင်းပြီး ဘ၀တက်လမ်းကို ရှာသင့်ပါတယ်။
လူဆိုတာ ရာထူးကြီးလာရင် ဒေါသကြီးလာတယ် (ပိုကြောက်တတ်လာတယ်)၊ ချမ်းသာလာရင် လောဘကြီးလာတယ် (လိုချင်မျက်စိပိုကြီးလာတယ်)၊ စာတတ်လာရင် မောဟအားကောင်းလာတယ် (သိသလိုလို တတ်သလို ပိုဖြစ်လာတယ်)
အဲဒါတွေအားလုံး ကင်းတဲ့သူတောင် ငါဆိုတဲ့ မာနအကြွင်းအကျန် ရှိသေးတယ် (အလွန်အမင်း နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အတ္တတမျိုး)
ှဆင်းရဲမွဲတေ တဲ့ ကိစ္စကို ပြောကြတဲ့လူတွေက အစိုးရကြောင့်ဖြစ်တာ တော့မပြောကြဘူး။ တကယ်က အစိုးရမကောင်းလို့ ဖြစ်တာ ဗျ။
ဘာသာရေးနဲ့ လဲမဆိုင်ဘူး၊ ပျင်းတာနဲ့ လဲမဆိုင်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်တိုင်းတပြည်လုံး ပျင်းနေကြတာမှမဟုတ်တာ။
ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ တို့ ၊ ဖွံ့ ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်ချို့ မှ အလုပ်သမား တွေ မနက် ၈ နာရီကနေ ညနေ ၄ နာရီ လုပ်ပြီး အချိန် ရောက်တာနဲ့တစ်မိနစ် မဆိုင်း အလုပ်ဆင်းသွားတာပဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ဒီလခ လေး၊ ၀င်ငွေလေး မရမှာစိုးလို့သူဌေးက ည ဂ နာရီ၊ ၉ နာရီ အထိ ခိုင်းလဲ လုပ်ရတာပဲ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ လဲ လုပ်ရတာပဲ။ အချိန်ပို ကြေးလဲ လူတိုင်းရကြတာမဟုတ်ဘူး။ ပျင်းပြီး အလုပ်မလုပ်တဲ့သူ ရှိပါ တယ်။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ တွေ နိုင်ငံခြားမှာ သွားနေကြပြီး ဗမာ ပြည်မတိုးတက်တာနဲ့ ဗမာပြည်ကလူတွေ ပျင်းတယ်လို့ ပြောလိုက် ၊ ထောက်ခံလိုက်ကြ နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီနိုင်ငံက အလုပ်အကိုင် အခြေအနေနဲ့အလုပ်အကိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို လာကြည့်ပါအုံး။ ဒီတိုင်းပြည်ကြီးဆင်းရဲနေတာ အစိုးရ အဆက်ဆက်က မကောင်းခဲ့လို့ ဖြစ်တာပဲ။ ဘာမှမရေရာတဲ့ တိုင်းပြည်၊ ဘာအခြေခံ အဆောက်အအုံ ကောင်းကောင်း မရှိတဲ့တိုင်းပြည်။ လျှပ်စစ်မီး လုံလုံလောက်လောက်မရတဲ့တိုင်းပြည်၊ ပညာရေးစံနစ် ကျန်းမာရေး စံနစ်ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်၊ ဘဏ်စံနစ် ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်၊ အခွန်စံနစ် မမျှတ တဲ့တိုင်းပြည်၊ ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ အများဆုံးတိုင်းပြည်၊ ဆက်သွယ်ရေးစံနစ် ဈေးအကြီးဆုံးနဲ့အညံ့ဆုံးတိုင်းပြည်၊ ဥပဒေ ကျင့်သုံးမှု အနည်းဆုံးတိုင်းပြည်၊ ကားဈေးအကြီးဆုံးတိုင်းပြည်။ အိမ် မြေဈေး အကြီးဆုံးတိုင်းပြည်၊ ပြည်သူ့ လုံ ခြုံမှု စားရိတ် အနည်းဆုံးသုံးတဲ့တိုင်းပြည်၊ ဒီလို တိုင်းပြည်မျိုးမှာ ဘာ ကြီးပွားစရာရှိလဲ။ မပြင်မခြင်း အလုပ်ကို ချီးထွက်အောင်လုပ်လဲ ချမ်းသာစရာမရှိဘူး။ ဒီနိုင်ငံ မှာ နေပြီး ချမ်းသာ ချင်ရင်၊ အာဏာရှိတဲ့လူ ဖြစ်အောင်ကြိုးစား ပြီးရင်လာဘ်စား။ အာဏာရှိတဲ့သူနဲ့ ပေါင်း မတရားစီးပွားလုပ်။ ဒါမှမဟုတ် ရင် နယ်စပ်သွားပြီး မူးယစ်ဆေးသွား လုပ်။ သမာအာဇီဝ နဲ့ တော့ ဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူး ဒီတိုင်းပြည်မှာ။ ဘီလ်ဂိတ် တို့စတီစ် ဂျော့ တို့ဗမာပြည် မှာ လူလာ ဖြစ်ကြည့်ပါလား အခု အချိန် ဆို လစာ ကျပ် နှစ်သိန်း ထက်ပိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာ နေတဲ့ လူတွေ သေသေချာချာ လေ့လာပြီးမှပြောပါ။ ခင်ဗျားတို့ ပြောကောင်းတိုင်းပြောနေ တာ ကျုပ်တို့ နစ်နာတယ်။ ကျုပ်တို့ က စောက်ပျင်း တွေ မဟုတ်ဘူး၊ စောက်ဖျင်းလဲမဟုတ်ဘူး။
I agree some of your idea “တကယ်က အစိုးရမကောင်းလို့ ဖြစ်တာဗျ”
Then, why are you waiting for ;
1. change the government or
2. if you cannot, go abroad ( foreign ).
3. but, I think, there are stillalot of opportunities even in Myanmar.
Did you really & diligently & perseveringly try your best ???
How long have you tried ?
If you work ( very very hard ) at least 12 hours everyday (everyday) &
If you keep working like it for 20 years &
If you are honest &
If you are neither very dumb nor handicapped.
I am definitely sure, you will be rich.
( except very tiny occasion of unluckiness )
But, don’t forget,
2. Loyalty is important & don’t change your profession & boss frequently.
3. Keep your aim clear “Money”, without money you cannot be rich.
4. Avoid jealousy.
5. Forget about drink, smoke, drug, lady, leisure, rest & holiday (sat, sun).
Forget about the marriage ( your aim is money, not wife )
I was married only after I becameaCaptain of Foreign Going Ship (39 years).
Because, I thought, I don’t have enough money to establish my own life.
At marriage, I already ownedahouse & land ( around xxxx Lakhs ).
All of Chinese people (living in Myanmar) were cruelly oppressed by all Myanmar Governments ( especially under Ma sa La ).
But, at least 80% becomes rich.
They generally followed this path.
I am alsoaChinese born in Myanmar &
I am still living in Myanmar.
Recently, I stay in Sydney,
But, I haven’t done any work/job in Sydney since I arrived to Australia.
My real job is still in Myanmar.
( Unfortunately, you might missed some things already, because,
Chinese were taught/trained to work very hard since their baby age )
ဒီထဲလာရေးနေသူတွေ အားလုံး..မြန်မာပြည်ထဲနေနေ.. မြန်မာပြည်ပနေနေ… မြန်မာတွေလို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်..။
မြန်မာပြည်ပနေပြီး လူမျိုးခြားစိတ်ပေါက်… မြန်မာတွေကို.. နှိမ်ချပြောလိုတဲ့..စိတ်စေတနာမရှိကြတာအမှန်ပါလို့.. ကြားဝင်အာမခံပေးပါရစေ..။
ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့… အဲဒီလိုလူမျိုးခြားစိတ်ပေါက်သွားသူတွေက.. ဒီလိုဝက်ဘ်ဆိုက်.. အပင်ပန်းခံပြီး လာကိုမကြည့်တာ တွေ့ဖူးလို့ပါပဲ..။
သူတို့က..သူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိ..သူတို့အထင်မကြီးတော့တဲ့မြန်မာတွေကို စိတ်ကို မ၀င်စားတော့တာ… အမှန်ပါ…။
ကျုပ်တို့က..ကျုပ်တို့မြန်မာတွေကို.. ဖြစ်ကြစေလိုရင်း.. နိုင်ငံတော်သစ်ထောင်လိုရင်းစေတနာနဲ့.. အပြုသဘောဖက်က. .ပြောနေတယ်လို့.. ယုံကြည်စေချင်ပါတယ်..။
တိတိကျကျဆိုရင်တော့ …အမိမြေကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ချည်း. .စေတနာရှိသူတွေပါလို့..။
ပြည်တွင်းရော.ပြည်ပရော..ဘယ်မှာနေနေ… စေတနာမရှိသူတွေက.. ဒီလိုဖိုရမ်တွေ..ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာ.. ရှိကိုမရှိနေပါဘူး..။
အဲဒါလေး.. ပြောလိုရင်းနဲ့.. အပြုသဘောနဲ့.. ဆက်ဆွေးနွေးပေးပါလို့… ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ..။
Atomပြောတာလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ စဉ်းစားစရာ အချက်တွေအများကြီး ပါ ပါတယ်။ ….ဒီတိုင်းပြည်ကြီးဆင်းရဲနေတာ အစိုးရ အဆက်ဆက်က မကောင်းခဲ့လို့ ဖြစ်တာပဲ။…
ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါ လင့်ကိုဖတ်ကြည့်ပါ ။
…မပြင်မခြင်း အလုပ်ကို ချီးထွက်အောင်လုပ်လဲ ချမ်းသာစရာမရှိဘူး။ ..
ဘာတွေကိုပြင်ဖို့လိုမယ် ဆိုတာ အကြံပေးစေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားလိုမျိုးဖြစ်စေချင်ရင် ဘာလုပ်ရမယ်ထင်ပါသလဲ။ ချမ်းသာရေးအတွက် အစိုးရနဲ့ပြည်သူ ၂ဦးစလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကြေကြဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် မောင်ပေ တစ်ယောက်
လုပ်ငန်းက ကောင်းတာနဲ့ 
အလှူငွေ 3သိန်း5သောင်း ကျပ် ရှိပါပြီ
မောင်ပေ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ကို
မောင်ပေနဲ့ အတူတူ ရကြပါစေ လို့ 
အမျှ အမျှ အမျှ ၃ ကြိမ်
ပုံ။ ။ သာဓုကပ်စေးနဲသူ… သူကြီး
စာရင်းလေး ရှင်းပြမလို့ ပါ
ဗျို့ …..ကိုယ့်ရွာသားများကို အရမ်းနိုင်နိုင်နင်းနင်း
ကျုပ် အလှူ တွေ ကို ပြောပြမယ်နော်
သီလရှင် ဆရာလေး တွေ ကျောင်းဆောက်နေတာ ရှိတယ်
အခု မှ စဆောက်နေတာ
ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းလို မျိုးလာမှာပေါ့ ဗျာ
အဲဒါ ကို အစတုန်းက ၃ သောင်းလှူခဲ့တယ်
ဒီ ၉ လပိုင်းမှာ ထပ်လှူတာ ၇ သောင်း ဆိုတော့
သီလရှင် ကျောင်းအတွက် ၁ သိန်းရှိပြီ
ကျွန်တော့် ကျောက်စိမ်းဆရာ နဲ့ အတူ
ဆင်ခေါင်းကြီး ပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်ကျောင်း
အယောက် ၁၂၀ လောက်ရှိတယ်
ဘုန်းကြီး က သူ့ ဇရပ် ကို ကျောင်းဖွင့် ၊ ဆရာမ ငှား ပြီး
သူငယ်တန်းကနေ ၊ ၅ တန်း အထိ (ကျောင်းသားတွေ ထဲ မှာ ၅ တန်း အကြီးဆုံး )
အခု ကျုပ်တို့ သွားလှူတဲ့ ပိုက်ဆံ ကို ပဒေသာပင် စိုက်ထူမှာဆိုတော့
ဆရာမ လခ ပေးဖို့၊ ရသွားတာပေါ့ဗျာ
အဲဒီမှာ ကျုပ် လှူတာ က ၈ သောင်း ကျပ်
နောက် ၂ သိန်းကတော့
ကျုပ် အမေ ကို ကျုပ်
သုံးချင်ရာသုံး ဆိုပြီး ပြန်ကန်တော့ တာ ဗျို့ 
ဒီကိတ်စ ကတော့ သားအမိ ချင်း ကန်တော့ တာ ဆိုတော့
ခင်ဗျား တို့ သာဓု မခေါ်ချင် လဲ ဖယ်ထားလိုက်ဗျာ
သီလရှင် ဆရာလေး ကျောင်းဆောက်ဖို့ ၉ လပိုင်းအတွင်း လှူတာ ၇ သောင်း
ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်ကျောင်း အတွက် လှူတာ က ၈ သောင်း
ပေါင်း ၁ သိန်းခွဲ လို့ ပဲ မှတ်ပြီး
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်ပါဗျာ
မခေါ်ချင်လဲ မခေါ်နဲ့ ဗျာ
ကွန်မန့် ဖိုး ပွိုင့် တစ်သိန်း
အမေကို သက်ရှိထင်ရှားရှိတုံး ကန်တော့ဘို့ သိတတ်တာလည်း သာဓုပါ၊
” လှူဖြစ်တာ အလှူငွေ 3သိန်း 5သောင်း ကျပ် ”
KTV or Massage or —–
ဒါဆိုတ၀က်မရဘူး ။ ၁၇ % ပဲရမယ်။
မောင်ပေတို့ ၂ ယောက်
သည်းခံပေးပါ ဗျို့ )
သူကြီးခိုင် ရဲ့ စကားကို နားလည်ပါတယ် ထို့ အတူ မျှတ စွာရေးသားမှုကိုလဲ လေးစားပါတယ်။ ကျုပ်အနေ ပြောတာက ကောမန့် တွေမှာ အစိုးရ အပြစ်ကို ရေးတာ မတွေ့ ပဲ ပျင်းလို့ဆင်းရဲ တယ်ဆိုတာကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ကျုပ် ပြောချင်တာက လူ တဦးတစ်ယောက် ကို မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံ နဲ့ ချီတဲ့ အမြင်ကိုပြောတာ။ ပို့ စ်ကိုက နိုင်ငံအနေနဲ့ ပြောတာလို့နားလည်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် ပျင်းလို့ ဆင်းရဲ တယ်ဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံးပျင်း လို့ ဆင်းရဲတယ်လို့ ဆိုလို တာမဟုတ်လား။
Foreign Resident ကိုလဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ် ၊ တရုတ် အနွယ်ဖြစ်တိုင်းချမ်းသာ ရင် ကမ္ဘာမှာ တရုပ်တွေ သန်းထောင်ချီနေပြီ ချမ်းသာရဲ့လား၊ မော်စီတုံးခေတ်က ချမ်းသာရဲ့လား၊ ထမင်းတောင်နပ်မမှန်တာ။ နိုင်ငံရဲ့ မူဝါဒ ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာ တရုပ်ပြည် တစ်ခုထဲရဲ့ ပြောင်းလဲ ပုံကို ကြည့်ရုံနဲ့တင်လုံလောက်တယ်။ အခု ဗမာပြည်မှာ ကော ဘယ်လိုတရုပ်တွေက ချမ်းသာ နေတာလဲ သေချာလေ့လာပါအုံး။ အခု ချမ်းသာနေတဲ့ တရုပ် အများစုက ကိုးကန့် နဲ့ ယူနန် တရုပ် အနွယ်တွေပဲ။ အရင်က တောင်ပေါ် သား ဆိုပြီး တရုပ်အချင်းချင်းတောင် ကဲ့ရဲ့တဲ့ ဒီ အနွယ်တွေ ဘာလို့ ဒီလောက်ချမ်းသာလာကြသလဲ လေ့လာပါအုံး။ ဗမာပြည်မှာ အချမ်းသာဆုံး တရုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ့် အေးရှားဝေါလ် ပိုင်ရှင် လိုမျိုး ရဲ့နောက်ခံ သမိုင်းကို လေ့လာပါအုံး။ သူ အဖေ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ။ မဆလ ခေတ် က တရုပ်တွေကို ရှာချင်ရင် တရုပ်တန်းမှာ သွားကြည့် ဖူကျင့် နဲ့ ဟတ်ကာ အများ စု လမ်းဘေးဈေးရောင်းနေတုံးပဲ။ ခင်ဗျား ပြောတဲ့ ၈၀% ဆိုတာက လွန်လွန်းပါတယ်။ ခင်ဗျား အနေနဲ့ကတော့ သိန်းထောင်ချီတန် အိမ်နဲ့သဘောင်္ကပ္ပတိန် တစ်ယောက်ဆိုတော့ အရာရာ အဆင်ပြေ နေပြီပေါ့၊ ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ချိုလားချဉ်လား ခါးလား တောင် မသိတဲ့ လူဆိုတော့ ငါ့လို မချမ်းသာတဲ့သူက ပျင်းလို့ ဆိုတဲ့ စကားပြောပြီပေါ့။ ကျုပ် ပြောတာမှန်မမှန်သိချင်ရင် ခင်ဗျား ကိုယ့်ကိုယ် ကို အဆင့်ချပြီး ဘာမှ မရှိတဲ့လူ တစ်ယောက်လို အလုပ်ရှာလုပ်ကြည့်ပါလား ။
ကျုပ်လိုက်ငြင်းချင်လို့ မဟုတ်ဘူး လူတွေကို အခြေအနေမှန် မြင်စေချင်တယ်၊ တိမ်တိမ်လေး မတွေးပဲ နက်နက် တွေးကြည့်ကြ စမ်းပါ၊ အခုဗမာပြည်ရဲ့ဆင်းရဲ မှုတွေဟာ အစိုးရ အဆက်ဆက် ကြောင့်ဖြစ်တာ။ ကြေငြာချက်တစ်ခု ထုတ်လိုက်တာနဲ့သိန်း ထောင်ချီရှုံးတဲ့လူတွေ ၊ ငွေကြေးမူဝါဒမမှန်လို့ကုန်ရောင်းရင်း ရှုံးတဲ့သူတွေ သူတို့ ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ခံစားကြည့်ပါလား၊ သူတို့ ပျင်းလို့ ရှုံးတာလား။ အစိုးရကြောင့်လားဆိုတာ။ နိုင်ငံခြားမှာ သကြားဈေး ၁၀% လောက်တက်ရင်တောင် အစိုးရက ဖြေရှင်းနေရပြီ ။ ခင်ဗျားပြောသလို အစိုးရပြောင်းခိုင်းတာတို့၊ နိုင်ငံခြားထွက်ပါတို့ ဆိုတာက ခင်ဗျားလို သူဌေး မျိုး ပြောတတ် တဲ့ စကားမျိုးတွေပဲ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေက ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့အသုံးတဲ့တာ တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမျိုးက စင်ပေါ်က ပြောရင်တော့ နားထောင်ကောင်းတဲ့ စကားမျိုးလောက်ပါပဲ။ ဗမာပြည်မှာ အလုပ်ကို ကြံဖန်လုပ်နေရတာ၊ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်က တက်စီ မောင်းချင်မလား၊ ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ဆေးကြော်ငြာသမား ဖြစ်ချင်မလား၊ လမ်းဘေးမှာ ငှက်ပျောသီး ရောင်းနေတဲ့ရူပဗေဒ ဘွဲ့ ရ တစ်ယောက်တောင် ကြုံဖူးတယ်။ သူတို့ ကော ပျင်းလား။ ဒီလောက်ကြပ်တည်းတဲ့ တိုင်း ပြည်မှာ ကြံဖန် လုပ်စား ရှာစား နေတဲ့သူ တွေကိုတောင် လူပျင်းလို့ ပြောတဲ့ ခင်ဗျားတို့ တွေကို သြချ လောက်ပါတယ်။
I can empathize/understand your bitter feeling ( really ).
But, I want to explain my comment.
– “ ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ချိုလားချဉ်လား ခါးလား တောင် မသိတဲ့ လူ ”
– “ အခုဗမာပြည်ရဲ့ဆင်းရဲ မှုတွေဟာ အစိုးရ အဆက်ဆက် ကြောင့်ဖြစ်တာ။ ကြေငြာချက်တစ်ခု ထုတ်လိုက်တာနဲ့သိန်း ထောင်ချီရှုံးတဲ့လူတွေ ၊ ငွေကြေးမူဝါဒမမှန်လို့ကုန်ရောင်းရင်း ရှုံးတဲ့သူတွေ သူတို့ ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ခံစားကြည့်ပါလား၊ သူတို့ ပျင်းလို့ ရှုံးတာလား ”
My grandfather died because of privatization made by Stupid Dictator Ne Win.
( Our family lost everything at that time & let say, we started from “zero” ( I repeat “Zero” ))
I remember, all of our family members struggled together from “zero” &
We only have honesty, unity, hardship, tolerance, restraint & perseverance.
– “ ကျုပ် ပြောတာမှန်မမှန်သိချင်ရင် ခင်ဗျား ကိုယ့်ကိုယ် ကို အဆင့်ချပြီး ဘာမှ မရှိတဲ့လူ တစ်ယောက်လို အလုပ်ရှာလုပ်ကြည့်ပါလား ”
So, I am not afraid to start from “ဘာမှ မရှိတဲ့လူ တစ်ယောက်” because I came from this position.
But, Don’t asked me to do it now, Pardon me, I am too old to start all again.
– “ နိုင်ငံခြားထွက်ပါတို့ ဆိုတာက ခင်ဗျားလို သူဌေး မျိုး ပြောတတ် တဲ့ စကားမျိုးတွေပဲ ”
After we suffered this privatization, my father no longer trusted to those bad Myanmar governments &
he said, all of our family members must be professional who can survives both in Myanmar & in Foreign. He also asked all of our family members to be prepare to migrate to foreign, within short notice.
Then, all of our family members ( including my father & mother ) became Doctors & Engineers
( most un-educated & naughtiest one in our family is me ( Ship Captain )).
All of my siblings live in Foreign now ( Except my parents & me still live in Myanmar ).
All of our family members neither drink, smoke, drug, nor gamble.
– “ အခု ချမ်းသာနေတဲ့ တရုပ် အများစုက ကိုးကန့် နဲ့ ယူနန် တရုပ် အနွယ်တွေ”
– “ ဗမာပြည်မှာ အချမ်းသာဆုံး တရုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ့် အေးရှားဝေါလ် ပိုင်ရှင် လိုမျိုး ရဲ့နောက်ခံ သမိုင်း “
I don’t want to refer to them. They are simplyamafias / armed gangsters.
– “ တရုပ်တန်းမှာ သွားကြည့် ဖူကျင့် နဲ့ ဟတ်ကာ အများ စု လမ်းဘေးဈေးရောင်းနေတုံးပဲ ”
Firstly, I am not rich ( at least, I don’t believe I am rich )
Because, I don’t haveaservant ( housemaid ), gardener & chauffer (driver) in Australia.
In fact, I own only one house in Myanmar.
Trust me, those “လမ်းဘေးဈေးရောင်းနေတဲ့ တရုပ်” Chinese might be richer than me.
I remember, one of my close friend is alsoa“လမ်းဘေးဈေးရောင်းတဲ့ တရုပ်”
Not only that, he also needed to bath in public water tap beside the dirty road.
But, he ownafactory now.
– “ တကယ်က အစိုးရမကောင်းလို့ ဖြစ်တာ ဗျ ”
I agree all of the Myanmar military governments are very bad to our Myanmar people.
In my own opinion, they are worse than Colonial Britain & same like Fascist Japan.
I also agree that most of Myanmar people are poor & poor because of those bad Governments.
But, I want to emphasis/say in my comment is ;
Even, the Government is bad,
But, you still haveatiny chance to become rich,
If you try very very hard & honest.
Do you realize, recently, our country become prosperous &
a lot of opportunities occurred &
economy is about to boom.
Kyauk Phyu & Dawei Deep-water ports are prosperous.
This two alone will make thousand of millionaires more for Myanmar.
I will return to Myanmar for my work/job ( within2or3months ).
With Love (ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် )
P.S, But, I am still holding my ideology “ ဆင်းရဲတာ ပျင်းလို့ ”.
Not ” privatization ”
I mean ” Nationalization “
……ကြေငြာချက်တစ်ခု ထုတ်လိုက်တာနဲ့သိန်း ထောင်ချီရှုံးတဲ့လူတွေ ၊….
ကားဈေးကျတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာလို့ထင်ပါတယ်။ ပို့စ်တခုထပ်တင်ဖို့ တင်သင့်မတင်သင့်စဉ်းစားနေပါတယ်။
…. ငွေကြေးမူဝါဒမမှန်လို့ကုန်ရောင်းရင်း ရှုံးတဲ့သူတွေ သူတို့ ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ခံစားကြည့်ပါလား၊ သူတို့ ပျင်းလို့ ရှုံးတာလား။ အစိုးရကြောင့်လားဆိုတာ။ ….
ငွေကြေးဈေးနှုန်းကို အစိုးရက သတ်မှတ်မထားပါဘူး ။ အပြင်မှာ သူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်နေကြတာထင်ပါတယ်။ အစိုးရက ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေ ကို ပြည်သူတွေကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုထားပါတယ်။ အရင်က နိုင်ငံခြားကို ရောင်းရင် LC နဲ့ ရောင်းရပါတယ်။ အစိုးရက ပြည်သူတွေနစ်နာတဲ့အတွက် TT နဲ့သာရောင်းရမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာ ပြည်သူတွေအကျိုးပါ။ ကုန်သည်တွေဆိုတာ အရှုံးနဲ့ အမြတ် အမြဲရှိပါတယ်။ ဒေါ်လာဈေးတွေ တောက်လျှောက်တက်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံးမြတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါ။ ရှုံးတာ အစိုးရကြောင့်ဆို မြတ်တုန်းကရော အစိုးးရကြောင့် လို့တခွန်းပြောဘူးပါသလား။ အဲဒီတုန်းကလည်း အစိုးရကြောင့်မြန်မာငွေ တန်ဘိုး မရှိဘူးလို့ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ အခုငွေမာလာတော့လည်း အစိုးရကြောင့် ရှုံးတယ် ပြောကြပါတယ်။ လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အစိုးရရဲ့တာဝန်ကြေပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မှာ ပြည်သူတွေက ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး အလုပ်လုပ်ကြရမှာပါ။ ကုန်သည်တွေဟာ ရှုံးမယ့်အလုပ်ကို မလုပ်ကြပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ မရှုံးဘူးတဲ့ကုန်သည်မရှိပါဘူး။
သူကြီးပြောတာ အင်မတန်မှန်ပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အမြင်တွေကွဲလွဲကြ၊ ဒေါမနဿတွေ ဖြစ်ကြရပေမယ့် တကယ့်စိတ်ရင်းအမှန်ကတော့ မြန်မာပြည်ကို ချစ်နေသေးတာ။ လူမျိုးခြားစိတ်မပေါက်သေးတာ။ မြန်မာပြည်မကြီးပွားလို့ အားမလိုအားမရဖြစ်ကြတဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ။ ကျွန်တော် တရုတ်ကပြားပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာကိုပဲချစ်တာ။ တိုင်းပြည်အတွက် တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် အမြဲရှိတယ်။ ခုနေတော့ စားဝတ်နေရေး ရုန်းနေရတုန်းပါ။
ကျုပ်ဘဝဟာလည်း ဦးဖောရိန်းပြောသလိုပဲ သုညနဲ့ စခဲ့ရပါတယ်။ မယုံရင် ဖတ်ကြည့်ပါ။
၀ – ထမင်းစ စားနိုင်တဲ့ အရွယ်မှာ အမေခွံ့ကျွေးတဲ့ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥနဲ့ ထမင်း စားခဲ့ရတယ်။
၁ – အမေအလုပ်သွားရင် မ တစ် ဆိုတဲ့ အမကြီးက ထိန်းကျောင်းပေးတယ်။
၂ – အသားငါးဈေးကြီးလို့ ဟင်းအ နှစ် အားပြုစားခဲ့ရတာ မမေ့သေးဘူး။
၃ – ခလေးဘဝနဲ့ အလုပ်ထဲမှာ အ သုံး ပြုခြင်း ခံခဲ့ရတယ်။
၄ – ဒီလိုနဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ လေး လံလာရော။
၅ – အလုပ်က ငါး ဖမ်းလှေလိုက်ရတဲ့ အလုပ်လေ။
၆ – ပင်ပန်းလွန်းလို့ သက်သာလိုသက်သာငြား ခြောက် ကြည့်ဖို့တောင် စိတ်ကူးမိတယ်။
၇ – ဘဝမှာ ပေးဆပ်ရလွန်းတော့ မာရေကြောရည်နဲ့ အ ခွံ မာသလို ဖြစ်သွားပြီ။
၈ – ဒီလိုနဲ့ ရှစ် ပင်းလိုင်းတခုမှာ သင်္ဘောလိုက်ခဲ့ရင်း အဆင်ပြေသွားတယ်။
၉ – အဲဒီကြမှ ရတနာသုံးပါး ကိုး ကွယ်ရကောင်းမှန်း သိတာဗျို့။
၁၀- နောက်တော့ အဘကျေးဇူးနဲ့ ဆည် ဆောက်တဲ့ ကန်ထရိုက်ရပြီး ကျိကျိတက် ချမ်းသာလာတယ်။
ကိုဖောရိန်းပြောသလို ကျွန်မအဖေကလဲ သုညနဲ့ စခဲ့ရပါတယ် … စက်ဘီးနဲ့ပစ္စည်းကယ်ရီတိုက်ရတဲ့ဘ၀ကနေ စခဲ့တာပါ … အခု အတော်ကလေး အဆင်ပြေနေပါပြီ …
ဈေးရောင်းဈေးဝယ် ကုန်သည်ဘ၀တွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့တာဆိုတော့ ရှုံးတစ်လှည့် မြတ်တစ်လှည့်ပါပဲ …
လူမျိုးနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးထင်ပါတယ် … အလုပ်လုပ်ရင် ချမ်းသာမှာတော့ သေချာတယ် … ကျွန်မတို့ဆိုင်မှာ ကူလီထမ်းခဲ့တဲ့ ကုလားတွေ (စာတစ်လုံးမှမတတ်) တောင် အခု ကိုယ်ပိုင်တိုက်တွေ ကားတွေနဲ့ သူဌေးဖြစ်နေတာ မျက်မြင်ပဲ …
ရပ်ကွက်ထဲက အကြော်သည်ကုလားမလက်ထဲက ရွှေလက်ကောက်တွေ တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးလာတာ တံတောင်ဆစ်အထိရောက်နေတာလဲ သူအလုပ်လုပ်လို့ပဲ …
ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ၀င်ငွေကို စီမံခန့်ခွဲမှု မကျွမ်းကျင်တာလဲ အဓိကကျပါသေးတယ် …
တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၅၀၀၀ ရှိပြီး ၇၀၀၀ လောက် သုံးနေရင်တော့ အကြွေးတင်ပြီး ဆင်းရဲတော့မှာပေါ့ …
– အလုပ်လုပ်ရင် ချမ်းသာမှာတော့ သေချာတယ်
– ဆိုင်မှာ ကူလီထမ်းခဲ့တဲ့ ကုလားတွေ (စာတစ်လုံးမှမတတ်) တောင် အခု ကိုယ်ပိုင်တိုက်တွေ ကားတွေနဲ့ သူဌေးဖြစ်နေတာ မျက်မြင်ပဲ …
– အကြော်သည်ကုလားမလက်ထဲက ရွှေလက်ကောက်တွေ တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးလာတာ တံတောင်ဆစ်အထိရောက်နေတာလဲ သူအလုပ်လုပ်လို့ပဲ …
Now, you can see, if we are not shy to do ” စက်ဘီးနဲ့ပစ္စည်းကယ်ရီတိုက်, ကူလီထမ်း & အကြော်သည် ”
Then, you can be rich.
Nature ရဲ့ ကောမန့်ဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ဖူးရဲ့ လားလို့ သိချင်ပါတယ်။ ငွေကြေးဈေးကွက်ကို အစိုးရက သတ်မှတ်မထားဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ငွေကြေးမူဝါဒကို အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတာပါ၊ ငွေကြေးမူဝါဒမှာ နိုင်ငံ အကျိုးစီး ပွားကို စောင့်ရှောက်ရမယ့် အသေးစိပ် ယန္တယား တွေရှိပါတယ်။ အခု ဖြစ်နေတဲ့ FEC, Earning, ဟွန်ဒီ, တွေက ဒီမူဝါဒ တွေကြောင့် ဖြစ်တာ။ သူများ နိုင်ငံ အနီးဆုံး ထိုင်း ကိုပဲကြည့် ဒေါ်လာ အားပျော့ ချိန်မှာ မြန်မာပြည်လို ၂၀% -၄၀% ဘတ်ဈေး မာ သွားတယ် ဆိုတာ မရှိသေးဘူး။ လ ပေါင်းများစွာ ဘတ် ၄၀ နားမှာပဲရှိတုံးပဲ။ ဒါတွေ က ငွေကြေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး မူဝါဒ ကောင်းလို့ ပဲပေါ့။
ငွေဈေးတက်တုံးက မြတ်တော့ ဘာမှ မပြော ဘူး။ ရှုံးတော့ ပြောတယ် ဆို export သမားပါ။ ဒေါ်လာဈေး တက်တော့ လူတိုင်း မြတ် တယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လား၊ အဲတုံးက import သမားတွေ ခံလိုက်ရတာပဲ။ အခု ဒေါ်လာဈေးကျတော့ import သမားတွေ ပြုံးတာပေါ့။ ကျုပ်ပြောချင်တာက ငွေကြေးတည်ငြိမ်ဖို့အစိုးရရဲ့မှန်ကန်တဲ့ မူဝါဒရှိဖို့ လို တာကိုပြောချင်တာ။ အစိုးရနဲ့တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်တယ်။ LC နဲ့TT ကိစ္စ .. ခင်ဗျားထင်တာ LC တို့TT တို့ သတ်မှတ်လိုက်လို့စီးပွားရေးသမားတွေ အရမ်းကောင်းသွားမယ် ထင်တာလား။ ကျုပ်ပြောပြမယ် အရောင်းအ၀ယ် တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာ Payment Term ဆိုတာက ရောင်းသူ ၀ယ်သူ သဘောတူ မှရ တာ။ ကျုပ်တို့ အစိုးရရဲ့ သတ်မှတ်ချက်က ကိုယ်ကရောင်းရင် TT နဲ့ ရောင်းရမယ်၊ ကိုယ်က ၀ယ် ရင် LC နဲ့ ပဲ ၀ယ်ရမယ်။ ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့် .. တစ်ဖက်ဖက်က ဒီ စည်းမျဉ်းကို မလိုက်နာရင် အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ ရပါတော့မလား။ ဒါကြောင့် ကျုပ်တို့ပစ္စည်း တစ်ခုကို import လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်း ၂ ရင်း လိုတယ်ဖြစ်လာတာပေါ့။ တစ်ရင်းက ဘဏ်မှသွားပြီး LC ဖွင့်ပါတယ်ဆိုပြီးသွားအပ်၊ နောက်တစ်ရင်းက ဟွန်ဒီနဲ့ လွဲ ပြီး နိုင်ငံခြားကို ငွေချေ၊ ကုန်ရောက်လာ ၇င် နိုင်ငံခြားဘဏ် က ကိုယ့်စာရင်းထဲကို ကိုယ့်ပိုက်ဆံပြန်လွဲထည့်။ ဘဏ်စားရိတ်ပဲ အလကားပေးလိုက်ရတယ်။ TT လဲ ဒီတိုင်းပဲ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံခြားကို ကုန်ရောင်းတော့ နိုင်ငံခြား ၀ယ်လက်တိုင်းက TT ကို မပေးချင်ဘူး။ ပမာဏ ဒေါ်လာ သောင်းချီရင် TT ပေး ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲ။ TT နဲ့ မချေလို့မရောင်းဘူး ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ ရောင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့တော့ အထက်က အတိုင်း ဘဏ်စားရိတ် အကုန်ခံပြီး မလိမ့်တပတ်လုပ်ရုံပဲပေါ့။ အဲတော့ ဘာဖြစ်လဲ စားရိတ်တွေ ပိုကြီးကုန်တာပေါ့။ ဒါတွေက အစိုးရ မူဝါဒကြောင့် တက်လာတဲ့ Transaction Cost တွေပဲ။
Foreign Resident နဲ့ တော့ ဆက်မဆွေးနွေးတော့ ပါဘူး၊ ကျုပ်တို့ က အမြင်မတူဘူး၊ ခင်ဗျားက လူတစ်ယောက် ချင်း အမြင်ကို ပြောတာ၊ ကျုပ်က နိုင်ငံ တစ်ခုလုံး အမြင်ကိုပြောတာ။ ပြီးတော့ ကျုပ်တို့ စံထားမယ့် ချမ်းသာမှု တိုင်းဖို့ပေတံ တွေ အညွှန်းတွေ မသတ်ထားခဲ့ဘူး။ ကျုပ်က တော့ နိုင်ငံဆင်းရဲတာ နိုင်ငံသားတိုင်းပျင်းလို့ ဆိုတာကိုလက်မခံတာ။ ပိုစ့် ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုက ဒီနိုင်ငံ မှာ အခုလတ်တလော လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး စမ်းစစ်မှုတွေပဲ။ တစ်ယောက်ချင်း အကြောင်းပဲပြောရရင် ကျုပ် အနေနဲ့ က ပြောစရာမရှိပါဘူး၊ ကျုပ်လဲ ခင်ဗျား အဖေ လိုပဲ ဖြစ်လာ တာပဲ။ Nationalization မှာ ကျုပ်တို့ မိသားစုလဲ ထိခဲ့တာပဲ။ ဒါကြောင့် အစိုးရမူဝါဒ တွေကြောင့် စီးပွားရေးသမား၊ ပညာရှင်၊ လူတွေအားလုံးဟာ အမှန် ရှိရမယ့် အခြေအနေ အဆင့်အတန်းကို မရောက်ကြဘူး။ ကြိုးစားထားသလောက် ရလာဒ် ကို မရနိုင်ဘူး။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်ကို မလှမ်းနိုင်ဘူး။
Whatever problems we talked about,
Everything will end up at this bad Military Regime.
Atom ပြောတာကောင်းးပါတယ်။ FEC ကတော့ မရှိသင့်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ဟာလည်း ကမ္ဘာ့မှာ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်ပြီး စီးပွားရေး အင်အားနည်းတဲ့ အတွက် ငွေဈေးတည်ငြိမ်ဖို့ ထိမ်းချုပ်ရာမှာ အင်မတန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံတော်ဟာ စီးပွားရေးအမြင်အားနည်းတယ် ဆိုတာ လည်း သိမှာပါ။ တချိန်ကငွေဈေးမတည်ငြိမ်မှု အကြီးအကျယ် ယိုးဒယားနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ယိုးဒယား နိုင်ငံဟာ ကိုယ့်ထက် စီးပွားရေး အများကြီးကောင်းတဲ့နိုင်ငံပါ။ ဒေါ်လာလည်းဒါမျိုး ဖြစ်ဘူးပါတယ်။
……ကျုပ်ပြောချင်တာက ငွေကြေးတည်ငြိမ်ဖို့အစိုးရရဲ့မှန်ကန်တဲ့ မူဝါဒရှိဖို့ လို တာကိုပြောချင်တာ။ အစိုးရနဲ့တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်တယ်။…..
ဘယ်လိုမူ ၀ါဒတွေချသင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပေးစေလိုပါတယ်။
……ငွေဈေးတက်တုံးက မြတ်တော့ ဘာမှ မပြော ဘူး။ ရှုံးတော့ ပြောတယ် ဆို export သမားပါ။ ဒေါ်လာဈေး တက်တော့ လူတိုင်း မြတ် တယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လား၊ အဲတုံးက import သမားတွေ ခံလိုက်ရတာပဲ။ …..
ငွေဈေးတက်တော့ export သမားတွေ မြတ်တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ import သမားတွေလည်းမရှုံးဘူးထင်ပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒေါ်လာတက်ဈေးမှာ တလစာရောင်းဖို့ပစ္စည်းကို ၆လစာလောက်မှာထားပြီး ဖြေးဖြေး ရောင်းကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုတော့ ကျရိပ်မှာ ၁လစာရောင်းဖို့၁လစာ အလျှင်မီရုံ သာ ၀ယ်ကြတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ ကုန်သည်တွေဟာ အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် တက်ရိပ်လား ကျရိပ်လား လူတိုင်းသတိထားတွက်ချက်တတ်ကြပါတယ်။ မှန်တဲ့အခါလည်းစား။ မှားတဲ့အခါလည်း လျှော်ရပါတယ်။
……ခင်ဗျားထင်တာ LC တို့TT တို့ သတ်မှတ်လိုက်လို့စီးပွားရေးသမားတွေ အရမ်းကောင်းသွားမယ် ထင်တာလား။….
export ကို LC နဲ့ ပို့တုန်းက အလိမ်ခံရတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ ငွေပြန်ဝင်ဖို့လည်း ၁လလောက်ကြာပါတယ်။ TT နဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၁လစာငွေတိုးသက်သာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ 2.5% အပြင် အတိုးနဲ့ဆို ပဲတန် ၁၀၀ ကို ၆၀၀သိန်း * ၂.၅%= ၁၅သိန်းသက်သာပါတယ်။
import သမားတွေ ၂ ၇င်းလိုတယ်ဆိုတာလဲ အမှန်ပါပဲ။ import ကို TT ခွင့်မပြုတာဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားအများစု အလိမ်မခံရအောင် အကာအကွယ်ပေးထားတာလို့ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ import သမားတယေက်ကTT ပေးဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ အ၇ာရှိကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး စာတင်ရင် လွဲပေးတဲ့ငွေကြေး ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်မိမိတာဝန်သာ ဖြစ်ကြောင်း undertaking ပေးရင် တော့ ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ (အကယ်၍ အလိမ်ခံခဲ့ရရင်လည်း လိမ်တဲ့ကုမ္ပဏီကို black list ကြေငြာဆိုင်းဘုတ်မှာကပ်ထားသင့်ပါတယ်။) import သမားတွေ ၂ ရင်း ရင်းစရာ မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်ကလည်းမိမိ ချမှတ်ထားသော မူများသည် ကောင်းသည်မှန်သော်လည်း ထိုကိစ္စများကို တင်ပြလာရင် ခြွင်းချက်အနေနဲ့ စဉ်းစားပေးသင့်ပါတယ်။
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ ကြားဘူးတာလေး …
Good people created Good Government.. တဲ့…. မှန်မမှန်တော့ မသိပါဘူးဗျာ..ကိုယ်ကလည်း people ထဲ ပါနေတော့ မမှန်ဘူးဗျာ မမှန်ဘူး ..
လူထုဟာ သူတို့နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုပဲ ရတယ်.။
အပေါ်က… ကုတ်ကတော့.. အင်မတန်နာမယ်ကြီးတာပဲ..။
htoosan ဆိုလိုချင်တာနဲ့.. နည်းနည်းတော့ ဆိုင်မှာပေါ့.။
Atomရော Nature ရော FRရော လက်ဖမိုးနဲ့ လက်ဖ၀ါး တွေပါ၊
…..ဒေါ်လာဈေး တက်တော့ လူတိုင်း မြတ် တယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လား၊ အဲတုံးက import သမားတွေ ခံလိုက်ရတာပဲ။ အခု ဒေါ်လာဈေးကျတော့ import သမားတွေ ပြုံးတာပေါ့။…..
Atom ပြောတာကိုစောစောကသိပ်သဘောမပေါက်ဘူး။ အခုမှစဉ်းစားမိလို့ထပ်ရေးလိုက်တာပါ။ အထက်ပါစကားအရဆိုရင် ဒါတွေဟာ import first မှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါ။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကို ရောင်းပြီးချိန်မှာ ဒေါ်လာနဲ့ ပြန်လွဲပေးရတဲ့သဘောပါ။ လူကိုယုံကြည်ပြီး ဈေးကွက်ထိုးဖောက်မှု နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ ကိုပေးတာများပါတယ်။ import တခု တပတ်လည်ဖို့အတွက် လိုင်စင်လျှောက်ငွေလွဲ သင်္ဘောတင် မှေ၇ာင်းပြီးတဲ့အထိ အနည်းဆုံး ၁လကြာပါတယ်။၁လကြာမှ မြန်မာငွေကနေ ဒေါ်လာကိုပြန်လွဲမယ်ဆိုရင် ငွေဈေး အရမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆို မွဲလောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ import မှာလည်း ငွေလည်ပတ်မှုမြန်စေဖို့ လိုင်စင်လျှောက်တာနဲ့ TTလွှဲဖို့ပါတခါတည်းတင်ပြီး ၁ရက်တည်း အပြီး လုပ်ပေးရင်ကောင်းပါမယ်။ သိပ်များရင်တော့ အလွန်ဆုံး ၃ရက်ပေါ့။ ၀န်ထမ်းတွေလိုရင်ထပ်ခန့်ပြီး ထပ်ခန့်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လစာပေးနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ခ လိုင်စင်တစောင် ၁၀၀၀၀ကျပ်လောက်ယူရင် အဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်တယ်။ ငွေလည်ပတ်မှုမြန်စေဖို့ Atom မှာ အကြံကောင်းတွေပိုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ငွေတိုး သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
တခုပြောချင်တာ သတိရလို့ ။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ စတော့ အိပ်ချိန်းတွေကို တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက် လုပ်တော့မယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေလာရုံနဲ့ ချမ်းသာနိုင်ပါမလား။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေလာရင်သူတို့ဆီမှာ ငွေကြေး အရင်းအနှီး အတတ်ပညာ ပါလာမယ်ဆိုတာ ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား တော်တော်များများ အလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါတွေဟာမြန်မာပြည်ကိုချမ်းသာစေမှာလားလို့တွေးမိပါတယ်။ ဥပမာ- မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းရှင်တဦး အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင် လုပ်ငန်းရှင်က ချမ်းသာမလား အလုပ်သမားကချမ်းသာမလား။ အလုပ်သမားကတော့ စားဝတ်နေရေးပြေလည်ပါလိမ့်မယ်။ တိုင်းးပြည်တိုးတက်ဖို့ လုံလောက်အောင် နိုင်ငံတော်ကရော ဘယ်နည်းနဲ့ ချမ်းသာမှာလည်း။ ဒါကတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကို တိုးတက်ဖို့ လုံလောက်အောင်အခွန်ကောက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သည်တွေဆိုတာ ဈေးကစားတတ်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းကုန်သည်တွေဈေးကစားတာ ကိုမထိမ်းနိုင်တာ ပြည်ပက ငွေအင်အားကြီး နည်းပညာမြင့်တဲ့ကုန်သည်တွေဈေး ကစားတာကို လက်ခံနိုင်မလား။ ဆန်ဆီ ဆား အစရှိတဲ့ပစ္စည်းဈေးတွေတက်လာရင်လက်ခံနိုင်မလား။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ပြည့်အင်အားသည်ပြည်တွင်းမှာသာရှိပါတယ်။ စတော့ရှယ်ယာတွေ ဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ လက်ရှိဘုရင့်နောင် ကုန်စည်ဒိုင်ဟာ စတော့ရှယ်ဟာဈေးကွက်ပုံစံဖြစ်ပြီး ဒါကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင် စတော့ဈေးကွက်တခု မထိမ်းနိုင်လို့ပိတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားအားကြီးတဲ့ နည်းပညာမြင့်တဲ့ကုမ္ပဏီ ကြီးတွေနဲ့ တရားဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရင်တော့ မိုဟာမက်အလီနဲ့ ခြေပေါင်ကျိုး လက်ဝှေ့ထိုးသလို နေပါလိမ့်မယ်။ အခုလည်း ပဲအရောင်းအ၀ယ်မှာ နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာငွေနဲ့မ၀ယ်ရ ဒေါ်လာဖြင့် FOBသာဝယ်ရမယ်ဆိုပြီး ပြည်တွင်း ကုန်သည်တွေကို အကာအကွယ်ပေးထားလို့ခံသာတာပါ။ မဟုတ်ရင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနယ်ဆင်းဝယ် ဂိုထောင်ငှား စက်တည်လုပ်ပြီး တိုက်ရိုက်ပို့နေကြတော့ ပြည်တွင်းကုန်သည်လေးတွေအခက်တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။ စတော့ရှယ်ယာကို ကျနော်သိပ်နားမလည်ပါ။
စတော့ရှယ်ယာပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြည့်ရတာအမြင်မှာ ရှယ်ယာကစားရင်ငွေရလွယ်ပုံပါပဲ။ ၅မိနစ် ၁၀ မိနစ်အတွင်းမှာ တသိန်းရင်းရင် တသောင်းလောက်လွယ်လွယ်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တသောင်းမရပဲ တစ်သိန်းပြုတ်သွားတာများပါတယ်။ ငွေဆိုတာ အမြဲတန်း ဘယ်တော့မှလွယ်လွယ်မရနိုင်ပါ။ လက်တွေ့မှာ ဘယ်လောက်အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ် ၅မိနစ် ၁၀ မိနစ်အတွင်းမှာ ၁၀% မမြတ်နိုင်ပါ။ ၂လုံး ၃လုံးထက်တောင်ပိုဒုက္ခရောက်ဦးမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ အကယ်၍ လုပ်ခဲ့လို့ ဒါတွေဖြစ်ရင်သတင်းစာ ဂျာနယ်တွေက ပညာပေးဆောင်းပါးတွေရေးပေးဖို့ လိုပါမယ်။